Iifoto, iMpawu kunye neentsingiselo zeTat Tattoos
Amathambo eengxowankulu achaza amalungu omgulane, afanekisela ukuzibophelela kunye nokuthembeka kumgundane, kwaye unokukwazi ukuchonga ulwaphulo-mthetho oluthile, isisongelo okanye esinye isiganeko esichaphazelekayo. AmaTattoos aqhelekileyo asetyenziselwa ukuthumela umyalezo wokwesatshiswa kunye nobunikazi kwezinye iigundane. Amalungu emigulane kuphela avunyelwe ukugqoka itekisi yeqela.
Usizi kunye noKulala iTeastrop Tattoos. UDavid McNew / Getty Izithombe
Ama-teardrop (phantsi) kwiso okanye kwisihlunu-amathambo ngokuqhelekileyo adibaniswa nezobhenqo zamathambo ejele.
Ukuba uchazwe ngokusoloko kuthetha ukuba umntu unesizi ngenxa yelungu legundane eliwileyo. Inokunikwa kwakhona ukukhunjulwa ngumntu othandekayo owafa xa ugqunywe eboshwe
Ukuba i-teardrop izaliswe kuyo ingabonisa ukuba umntu ombetheyo wabulala umntu. Inani leentsimbi ezizaliswe ngokuqhelekileyo libonisa ukuba inani labantu babulala ilungu legundane.
Ukhethiweyo: "I-Bloodhound", i-'fower caller 'okanye umphathi weqela le-LA Bloods, uthetha kumnyathelisi ekuxhaseni ukunikezelwa kweStanley' Tookie '' uWilliams , umsebenzi-mbumbulu weqela lokulwa neCrips gang, ngoDisemba 1, 2005 eLos Angeles, eCalifornia.
Igosa Eliqhelekileyo Lentolongo I-Tattoo Ivalwe I-Teardrop. UGary Porter / iMilwaukee I-Journal Sentinel Online
Iimpawu ze-Teardrop ezantsi kweso okanye i-cheekbone zidibaniswa neengxowankulu zentolongo ngabasemagunyeni nakwezinye izigqeba. Lo mfanekiso we-teardrop evaliweyo ebonisa ukuba umntu uyilungu legundane elijongene nokubulala umntu.
Kwakhona kwaziwa ngokuba yi-AAC yaseAfrika yase-American Council Tattoo. I-Arizona Dept. yezohlengahlengiso
I tattoo ye-African American Council ingabandakanya inkcazo ephindwe kabini yelizwekazi laseAfrika kunye ne-AAC okanye i-113 iileta ezimele i-AAC.
Yaziwa nangokuthi yi-AB. U-Aryan Brotherhood. I-Arizona Dept. yezohlengahlengiso
Imisebenzi ephambili ye-AB igxininise ekuthengiseni iziyobisi, ukuphanga, ukuxinwa kweengcinezelo kunye nokuziphatha kwangaphakathi.
Ubuzalwane bo-Aryan buvela ngo-1967 kwisejele laseSan Quentin e-California. Amalungu abonisa ezininzi iimpawu eziphezulu ezimhlophe, iimpawu ze-neo-nazi kunye neengcamango kwaye ngokuqhelekileyo zibandakanya kwiidatto kunye neempawu zechungechunge kunye neencwadi.
Igama elithi "U-Aryan Brotherhood" okanye "AB" liphakathi kwezihlunu zeengcambu ezivame ukufumaneka kwiimpawu zamagqabha.
Ezinye izihlomelo ziquka:
AB, intliziyo, neenkemba
Iqabunga le-clorock clover
Iibhentshi ezimbini zokukhanyisa
Amanani "666" - uphawu lwesathana
Igama likarhulumente ilungu elihlala kulo.
Namhlanje i-AB iye yasasazeka kwiintolongo zombini kunye nakwiintolongo zaseburhulumenteni kwaye ibandakanyeke ngaphakathi nangaphandle kwentolongo kwiisalathisi, ukuphanga, ukubulala ukuqeshwa, ukukhwabanisa kwezixhobo kunye nokuhambisa iziyobisi.
Ukusetyenziswa kobuzalwana bama-Aryan kwiimpawu zamaNazi
U-Aryan Brotherhood. I-Arizona Dept. yezohlengahlengiso
Ezinye iimpawu eziqhelekileyo ezifakwe kwi-Aryan Brotherhood tattoos zichaphazela amaNazi njengama-Bolts e-SS ayesetyenziswe ngamapolisa akhethekileyo aseJamani, abagcini beentolongo kunye neentolongo ngexesha loWWII.
Omnye, obizwa ngokuba nguParteiadler (ukhozi lwentlanga yamaNazi ) unokubonisa ixesha elithile lejele elisebenzelwe ilungu okanye ilungu lentsapho elenzile ulwaphulo-mthetho ukuze lube luhle kakhulu.
Zomibini iimpawu ziye zavinjelwa eJamani kwaye zingabi mthethweni e-Austria, eHungary, ePoland, kwiRiphabhlikhi yaseCzech, eFransi, eBrazil, eRashiya nabanye.
I-Spider Web I-Aryan Brotherhood Tattoos. I-Arizona Dept. yezohlengahlengiso
Amathambo amakhulu okanye amaninzi amaninzi angabonakalisa inqanaba lamalungu emigulane yokuzinikela kwiqela labo.
Ulwakhiwo lwewebhu lobunqunu, olubonwa apha kwiphexu elisekhohlo lomntu, lufumaneka rhoqo kwiingalo okanye ngaphantsi kweengalo zamadracists asechithe ixesha ejele. Kwezinye iindawo, okubonakala ngathi "uyayifumana" le tattoo ngokubulala abantu abancinci.
I-Celtic lettering ibhala i-Aryan Brotherhood kumanqanaba omntu ibonisa ngokucacileyo ukuba ubuhlobo bakhe bubuphi.
Amazwe aseMexico aBorder Brothers. I-Arizona Dept. yezohlengahlengiso
Abazalwana beBorder bavame ukuba ngabangeneleli abangekho mthethweni abavela kummandla ofanayo waseMexico okanye abangena eMelika ngokungekho mthethweni ngeli xesha.
Iimida zabazalwana bezitho zengxowankulu ziza kufaka uphawu lwama-Aztec kaThixo, olufakwe ngaphakathi kwelanga ezinezibane ezinkulu kunye nezibane ezincinane ezisibhozo kunye neenobumba "BB" (isiNgesi seBorder Brothers) okanye iinombolo "22" ezibonisa igama.
Igosa likaGrandel - iKardinal Tattoo
Grandel Gang. I-Arizona Dept. yezohlengahlengiso
Iqela leGrandel yincinci encinci yokhuseleko e-Glendale, e-Arizona eyenziwe ngabantu baseMexico baseMelika. AmaTattoos kule nkqubela iquka intloko yekhadidiyali.
I-Mexican American Arizona Gang I-Grandel Gang Tattoo. I-Arizona Dept. yezohlengahlengiso
Kulo mfanekiso we tattoo yomntu osemkhulu, ungabona igama legundane kwiibhokisi ezinkulu eziboniswe ngasemva kwakhe, kubonisa ukuzinikela kwakhe kwiqela legundane.
Kwakhona, i-cardinal ene-BB egameni lomzimba weentaka ngumqondiso wokuthi indoda leyo ilungu legundankulu.
Ukhuseleko lweqela leDe Mau Gang Gang. I-Arizona Dept. yezohlengahlengiso
Umzekelo weDe Mau Mau tattoo.
I-De Mau Mau yasungulwa ngumgcini we-bodyguard kuMalcolm X, uCharles 37X Morris, owathi waguqula igama lakhe uCharles Kenyatta. I-African American gang ideology ithonywe yiPhathi leNtsundu ye-Black Panther, i-Black Guerilla Family, Abafundi be-Black Gangster kunye noBuzwe boMnyama (BLA)
New Mexican Mafia. I-Arizona Dept. yezohlengahlengiso
Amalungu eNew Mexican Mafia kufuneka afake iqhakazi, iguqa eliphindwe kabini, i-"MM" ephindwe kabini kunye namalamlilo azungeze isangqa kumathambo abo.
I-M ephindwe kabini kufuneka ijike ngaphantsi kwaye iwele ngaphantsi. Oku kuthetha ukuba ilungu liye lawela kwi-Mexican Mafia yaseMexico ukuya eNew Mexican Mafia, ukuba yayilungu lalokuqala.
Amalangabi amakhulu kufuneka athembeke ngokukhawuleza kweso-clock kwaye ahluthe i-shaded. Amatangatye amancinci ancike kwiwashi kwaye kufuneka aphethwe ngokupheleleyo.
I-rose isho ukuba ilungu liye lagqiba ngokugqitywa ukuhlaselwa "kweentshaba" zakhe kwaye libhekwa njengelona lihloniphekileyo ilungu elingafumana.
Ukufihla amaT Tattoos eGundle Ukufihla amaTattoos amaGogo. FBI
Umntu okhunjulwayo wegundane ubeka uphawu lwakhe ngobuqili. Ukufihla amathambo omzimba kuba yindlela ethandwa ngayo njengoko amagunya aqhubeka nokuqonda iingcaciso kunye nezihlomelo emva kweempawu.
Amagama athetha ibali lelungu elithandwayo. Ukuthengiswa nokuhanjiswa kweziyobisi ngumthombo oyinhloko yengeniso yamalungu emigulane.
I-Octet Rule Definition
Ulwakhiwo olufanayo (igrama)
Funda indlela kunye nexesha lokutshintsha iigesi kwiBhayisikili yakho
Mkhulu okanye ngaphantsi kweePhepha zokusebenzela ukuya kuma-20
Emva, Ngaphambi, Xa
Iifom zedatha yeDolch ePrintshiweyo - I-Checklists
Iingcebiso zokuPenda ngeeManzi eziHlangeneyo